‘हजुरहरुलाई मबिनाकाे दशैं मनाउन दिने पटक्कै मन थिएन’ « Janata Samachar
एकैछिनमा बिर्सने भइसक्नु भएकी हजुरआमा मलाई भने बेला/बेला सम्झेर ‘कान्छी आइपुगिन ? कतिबेला आउँछे ? आउँदै छे कि ?’ भनेर तपाइँहरूलाई हैरान बनाउँदै हुनुहुन्छ होला ।
ममी ड्याडी नमस्कार,
सन्चो बिसन्चो के सोध्नु ? बिहान मात्र फोनमा कुरा भएको । अनौठो लाग्यो होला । पहिलो पटक मेरो नमस्कार देखेर । अनौठो मान्नुपर्दैन । पत्र काेरेर औपचारिकता मात्र पूरा गरेकी हुँ । सबैभन्दा अनौठो त त्यो बेला लाग्यो होला, जब प्रत्येक दिन घण्टाैंसम्म फोनमा बोल्ने छोरीको पत्र देखियाे। ममी, कति कुराहरु बोल्न खोज्दा गलाबाट आवाजभन्दा पहिले आँखाबाट अश्रुधारा नै वर्षिन्छन् । मलाई हजुरहरुलाई आँशु मिसिएको आवाज सुनाउन मन लागेन, त्यसैले पत्र लेखेँ ।
ममी यतिबेलासम्म त घरका सारा काम, पूजापाठ सकेर सबैजना नजिकै ठूलोबुबाको घर पुगिसक्नुभयो होला । साइतको टीका हजुरआमाको हातबाट लगाउन अंकल-आन्टी, दाई-भाउजुहरु, भाइबहिनी आउने क्रम जारी होला । ठूलो बुबाले टीका अघिको आजको पूजाविधि नै सक्नुभएको छैन होला, प्रत्येक वर्षझैँ ड्याडी पुगेर अघि सर्नुभयो होला । ठूलो ममी र भाउजुहरुलाई खाना तयार गर्न नै भ्याइनभ्याइ होला । यसपालि मेरो लागि च्याउ किनेर ल्याउनु पर्ने र छुट्टै भान्सा तयार गर्नुपर्ने झन्झट नभएर केही सहज भने पक्कै भएको होला । ममी कहिले भान्सामा कहिले ड्याडीलाई त कहिले हजुर आमालाई सघाउन पुग्नु हुँदो हो । केटाकेटी घरभरी आफ्ना मान्छे, नयाँ लुगा, खानेकुरा, आफूजस्त्रै खेल्ने साथी पाएर मख्ख पर्दै आँगनभरी खेलिरहेका होलान् । एकैछिनमा बिर्सने भइसक्नु भएकी हजुरआमा मलाई भने बेला/बेला सम्झेर ‘कान्छि आइपुगिन ? कतिबेला आउँछे ? आउँदै छे कि ?’ भनेर तपाइँहरूलाई हैरान बनाउँदै हुनुहुन्छ होला ।
अस्ति भर्खर गणेश दाजुको छोरो (साइलाबुबाको नाति) ले भाउजुको माेबाइलबाट ‘भ्वाइस म्यासेज’ पठाएको थियो । भन्दै थियो, ‘दिदी हजुर कहिले आउने ? दशैंमा आउनु, हस ? मैले हजुरलाई सम्झिरहेको छु।’ पाँच वर्षको उसकाे कलिलो आवाजले माया भरिएका शब्दमा यसो भनिरहँदा एक पटक त भक्कानिएकी थिँए । आज आउने बित्तिकै उसले मलाई नै खोज्दो हो र नदेखेपछि दिदी खै भनेर सोध्दो हो पनि।
अष्टिमीको दिन काटेको खसीको मासुको गन्धलाई बिहानै घर आँगन लिपेको गोबर, फक्रँदै गरेको सयपत्री, ढोकामा लगाउन र पुजा गर्न ल्याइएको दुबो, अगरबत्ति र दहिमा मुछेको अक्षताको बासनाले छिचोल्दै होला । दशैंको माहोल त घरमा बनिसकेको होला तर हजुरहरुको मन बन्न सकेको छैन् । मलाई थाहा छ ममी, हजुरहरुलाई मबिनाकाे दशैं मनाउन पटक्कै मन थिएन । मलाई यो पनि थाहा छ कि, हजुरहरु दशैं मनाइरहनु भएको छैन, देखाइरहनु भएको मात्र छ । र औपचारिकता मात्रै पूरा गरिरहनुभएको छ ।
अष्टिमीको दिन काटेको खसीको मासुको गन्धलाई बिहानै घर आँगन लिपेको गोबर, फक्रँदै गरेको सयपत्री, ढोकामा लगाउन र पुजा गर्न ल्याइएको दुबो, अगरबत्ति र दहिमा मुछेको अक्षताको बासनाले छिचोल्दै होला । मलाई थाहा छ ममी, हजुरहरुलाई मबिनाकाे दशैं मनाउन पटक्कै मन थिएन ।
मलाई नढाँटी भन्नु त ममी, यतिबेलासम्म हजुर कतिपटक कोठाभित्र पसेर भक्कानिदैं मन सम्हालेर फर्किनुभयो ? कतिपटक आँशु थाम्न नसकेर भित्र पसेर धित मरुन्जेल रूनुभयो ?
९० वर्ष पुग्दै लागेकी हजुरआमाको चाउरी परेर तुर्लङ्ग झुन्डिएका गाला सुमसुम्याउन मेरा हातलाई कति हतार थियो ? छेउमा बसेर ड्याडीले अरुसँग बोलिरहँदा चलेका उहाँका ओठहरु नियाल्न पनि कम्ता मन थिएन । म आउने बेला बोलि फुट्न लागेकी कान्छा दाजुकी छोरीले दिदी भनेको सुन्न खुब प्रतिक्षा थियाे मेरा कानलाई पनि । ममीले बनाएको खानाको स्वाद लिन जिब्रोलाई हतार थियो । दुई महिना अघिदेखि कहिले आउँछेस भनेर हैरान बनाउने साथीहरुसँग कमली आन्टिको पसलमा बसेर एउटै प्लेटमा चटपटे खान, उनीहरुसँगै पीङ खेल्न मात्रै होइन, घरपरिवारसँगै दशैं मनाउन मेरो मनलाई खुब हतार थियो । तर सकिन ।
मिलेसम्म र सम्भव भएसम्म आउँछु त भनेकै थिएँ। हजुरहरुले नै सिकाउनुभएको थियो नि, आज्ञाकारी हुनु भनेर । हाे, आज मैले हजुरले भनेजस्तै सरकारको आज्ञाकारी नागरिक बन्न मेरा अरू साथीहरू जस्तै परिवारसँगै बसेर दशैं मनाउन नपाएकी मात्रै हुँ । कोरोना फैलन नदिन सरकारले जो जहाँ छ, त्यहिँ बसेर दशैं मनाउन अनुरोध गरिरहेको पनि यहाँहरूले सुन्नु भएकै छ । हाे, मैले पनि सरकारकाे यही अनुरोध अस्वीकार गर्न सकिन ममी !
९० वर्ष पुग्दै लागेकी हजुरआमाको चाउरी परेर तुर्लङ्ग झुन्डिएका गाला सुमसुम्याउन मेरा हातलाई कति हतार थियो ? छेउमा बसेर ड्याडीले अरुसँग बोलिरहँदा चलेका उहाँका ओठहरु नियाल्न पनि कम्ता मन थिएन । म आउने बेला बोलि फुट्न लागेकी कान्छा दाजुकी छोरीले दिदी भनेको सुन्न खुब प्रतिक्षा थियाे मेरा कानलाई पनि ।
यहाँ सँगै बसेर काम गर्ने सहकर्मीहरुलाई पनि भटाभट कोरोना देखिन थालेको छ । दिउँसो कुनै काम विशेषले भेटिएका साथीहरु साँझ फेसबुकमा स्टाटस राख्छन्, ‘मलाई कोरोना पोजेटिभ देखियो, सम्पर्कमा आउने साथीहरु सतर्क रहनुहोला’ भनेर । यस्तो जोखिमै जोखिममा बसेकी मैले कोरोना बोकेर घर आएँ भने घर र गाउँ कसरी सुरक्षित हुन सक्छ ? ‘कोरोना परीक्षण गराएर भए पनि आइज’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ड्याडीले पनि। परीक्षण गरेरै आए पनि यात्राका क्रममा कोही कतैबाट नसर्ला भन्न कहाँ सकिन्छ र याे डरलाग्दाे काेराेना । ज्यान रहे त दशैं वर्षैपिच्छे आउँछ नि ! म एक दशैंको आर्शिवादको लागि सँधैको दशैंको आर्शिवाद आफैंँले कसरी लुट्न सक्छु ! ममी हेर्नु त, तपाइँकी सानी छोरीले कति बुझ्ने कुरा गरेकी छे । अब खुशी हुनुस् है !
हेर्नुहाेस् न ममी, थोरै दु:ख त मलाइ पनि लागेको छ । पहिलो पटक दशैंमा घरभन्दा बाहिर एक्लै छु । तर म रोएकी भने पटक्कै छैन् । बडादशैंको अवसरमा अफिसमै टीका लगाउने कार्यक्रम छ । तपाइँकी छाेरी मात्र हाेइन, दशैंका बेला याे सुनसान शहरमा छुटेका सुनसान मनहरू अरू धेरै छन् । हाम्रै अफिसका केही साथी बिदामा भएपनि यहाँ जति छाैँ, त्यसमै पारिवारीक वातावरण छ । हाँस्दै, रमाइलो गर्दै सबजना घरको न्यास्रो मेटाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
म भने पहिलो पटक घरबाहिर, परिवारबाट टाढा अफिस र अफिससँगको दशैंको नयाँ अनुभव संगालिरहेकी छु । म एकदम खुशी छु । दु:ख त त्यसबेला लाग्छ, जब घरमा सबैजना मेरो अभाव महसुस गर्नुहुन्छ, मलाई सम्झेर दु:खी बन्नुहुन्छ । त्यसैले मलाई खुशी बनाउन हजुरहरु पनि खुशी भएर दशैं मनाउनु है ममी !
हजुरहरू, सम्पूर्ण परिवार र हाम्रा प्रीय गाउँलेहरूलाई दशैंकाे धेरै – धेरै शुभकामना । काेराेनाबाट बच्न विशेष ख्याल गर्नुहाेला है !
मिलेसम्म र सम्भव भएसम्म आउँछु त भनेकै थिएँ। ममी हजुरहरुले नै सिकाउनुभएको थियो नि, आज्ञाकारी हुनु भनेर ? हाे, आज मैले हजुरले भनेजस्तै सरकारको आज्ञाकारी नागरिक बन्न मेरा अरू साथिहरू जस्तै हजुरहरूसँगै बसेर दशै मनाउन नपाएकी मात्रै हुँ । कोरोना फैलन नदिन सरकारले जो जहाँ छ, त्यहिँ बसेर दशैं मनाउन अनुरोध गरिरहेको पनि यहाँहरूले सुन्नु भएकै छ । हाे, मैले पनि सरकारकाे यही अनुरोध अस्वीकार गर्न सकिन ममी !
-हजुरहरूकी प्यारी छाेरी